सांसद प्रकाश रसाइलीले भने ‘वर्तमान सरकार, बाँदरको हातमा नरिवल’ « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
सांसद प्रकाश रसाइलीले भने ‘वर्तमान सरकार, बाँदरको हातमा नरिवल’
२०७६ बैशाख २३, सोमबार मा प्रकाशित
हामीले ७० वर्षमा ७ वटा संविधानको अनुभव बटुल्यौं । यो शासन प्रणालीको बिकल्प छैन । जान खोजेको कता हो यो सरकार ? जनवादी केन्द्रियताको मनोविज्ञान, शासन प्रणाली लोकतन्त्र ? केन्द्रिकरणको मनोविज्ञान ? त्यतिले मात्र होइन सभामुख महोदय, १३ करोडका लागि धर्मप्रचार ?
हामीले संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्यौ, त्यसमा दुई मत छैन । राज्यको धर्म हुँदैन । देशको प्रधानमन्त्री राजधानीमा हुँदा फाइभ स्टार होटेलमा सुतेर होली वाइन खाएर १ लाख डलर १३ करोड लगानीमा १ लाख डलर थाप्न मिल्छ ? तपाई रत्नपार्कमा जानुस्, माइतीघर मण्डलमा जानुस् । आज नागरिक समाजका अगुवा जसले हामी जत्तिकै, राजनीतिक दलहरुको जत्तिकै गणतन्त्रका निम्ती रगत र पसिना बगाए । कोही सांसद भएका छैनन् । कोही मन्त्री भएका छैनन् ।
आज उनीहरु पनि सडकमा आएर यो शासन जोगाउनका निम्ती सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति कसले सृजना ग¥यो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले । तसर्थ म भन्न चाहान्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातबाट संवृद्धिको कुरा छोडदिनुस् ।
संवृद्धि त सम्भव छैन । यो शासन प्रणाली जोगाउनका निम्ती पनि सत्तासिन पार्टीका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नुस् । तब मात्र नीति तथा कार्यक्रम सक्षम हुन्छ ।
के आयो, आउँछ पानी जहाज ? साउन भदौमा काठमाडौंमा हेलिकप्टर गुड्ने, प्लेन हिँड्ने मोटरबाटो हाइवे बनाउँछु भन्नु भाको छ ।
काठमाडौंमा साउनको महिनामा आइहाल्छ नि, पानी जहाज –काठमाडौंका सडकहरुमा । पानीले भरिएको हुन्छ काठमाडौं ।
त्यसैले हामीले यो कुरा भन्नु भन्दा अगाडि सम्माननीय सभापति महोदय संसारको इतिहासमा कम्युनिष्टहरु एक पटक शासन प्रणालीमा आएपछि फेरि फर्केर आउँदैनन् । २० औ शताब्दीको अन्त्यतिर संसारभर कम्युनिष्टै कम्युनिष्टहरु थिए । तर आज भेनेजुयलामा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नु पर्ने सृजना भएको छ ।
हातमा गन्नु पर्ने देशहरुमा पनि कम्युनिष्टहरु छैनन् । पतन हुँदै गएका छन् । राज्य सत्ता पतन होला, राजनीतिक दल पतन होलान् । तर हाम्रो शासन प्रणाली पतन हुनु हुँदैन सभापति महोदय । तसर्थ शासन प्रणाली जोगाउने काम गर्नुप¥यो ।
पानी जहाजको कुरा, रेलको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा कहाँ गयो ? आज भारतको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्छ, त्यसैले नेपालमा भन्दा केही फरक पर्दैन भनेर भन्ने । मन्त्रीहरु जति भारत जाने, पार्टीका नेताहरु चाहिँ चाइना जाने, हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ गयो ? आज अमेरिका जाँदै गर्दा अमेरिकाबाट फर्कीसकेपछि स्वर्गै पुगेर फर्केको हुँ भन्ने जस्तो अनुभूति हुन्छ होइन, सत्तासिन पार्टीका नेताहरुलाई ? त्यसैले आफूतिर फर्किन जरुरी छ ।
नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, सम्माननीय राष्ट्रतिलाई, महामहिम राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको छ यो सरकारले । हाम्रो राष्ट्रपति संस्थाकाप्रति श्रद्धा छ ।
त्यो शासन प्रणालीका निम्ती हाम्रो पुस्ता, हाम्रो पार्टी पनि लडेको हो । हाम्रो नेतृत्वमा संविधान ल्याएका हौं सभामुख महोदय ।
त्यसैले सभामुख महोदय, के प्रतिपक्षले वाइडवडीको कुरा गर्दा, कार्वाही गरौं भन्दा प्रतिपक्षले अर्घेल्याइँ गर्यो ? कार्वाही गर्नुस् न प्रधानमन्त्री ज्यू, को को पर्छन् । कार्वाही गर्नुस् । कटघरामा ल्याउनुस् ।
रविन्द्र अधिकारी मरेर जानु भयो । उहाँका प्रति फेरि पनि श्रद्धाञ्जली । तर प्रधानमन्त्रीले उहाँ सम्मिलित हुनुहुन्न भनेर भन्ने अधिकार छ ? उहाँ न्यायालय हो ? उहाँ अख्तियार हो ? उहाँ विशेष अदालत हो ?बलुवाटारको जग्गामा आफ्नै पार्टीको नेता मुछिदै गर्दा उहाँ पनि दोषी हुनुहुन्न, झुक्किनु भो रे । छक्किनु भो । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई, देशको प्रधानमन्त्रीलाई, अथवा सांसदलाई, मन्त्रीहरुलाई झुक्किने अधिकार छ ? छक्किने अधिकार छ ? ठगिने अधिकार छ ? त्यसबाट जोगिन पाइन्छ हामीले ? हामी जनप्रतिनिधि हौं । जनताबाट अनुमोदित हो ।
एनसेल प्रकरणमा देश कति ठगियो । को-को छन् ल्याउनुस् । कार्वाही गर्नु पर्छ । यो देशको पहिलो समस्या शासन प्रणाली जोगाउने हो । दोस्रो समस्या भनेको हामीले शासन प्रणाली जोगाउने संगसंगै देशको भ्रष्टाचार हाम्रो समस्या हो । त्यसलाई निर्मुल नगरेसम्म जति नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि यो सरकारको हातबाट बाँदरको हातमा नरिवल हुन्छ, धन्यवाद !
(राष्ट्रियसभा सांसद प्रकाश रसाइलीले संसदमा राख्नुभएको मन्तव्य जस्ताको तस्तै ।)